यस्तो भिडियो शेयर गर्दै आफ्नै पार्टीकी रेखा थापाको किन खेदो खने कमल थापाले ? « Canada Nepal
यस्तो भिडियो शेयर गर्दै आफ्नै पार्टीकी रेखा थापाको किन खेदो खने कमल थापाले ?
काठमाडौं – बुधबारबाट सुरू भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन अहिले काठमाडौंमा जारी छ। राप्रपाको आगामी अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।
यस्तै लिङ्देनको प्यानलबाट अभिनेत्री रेखा थपाले पनि महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । यसैबीच शुक्रबार अध्यक्ष थापाले लिङ्देनको प्यानलमा खुलेकी अभिनेत्री थापाको एक भिडियोलाई लिएर व्यंग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अभिनेत्री थापाको एक पुरानो भिडियो शेयर गरेका छन् ।
भिडियोमा पत्रकार प्रकाश सुवेदीले रेखालाई राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर रोज्न लगाएका छन् । रेखाले भने जवाफमा गणतन्त्र भनिन् । यस्तैमा फेरि सुवेदीले सोध्छन् तपाईँ अहिले कुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ रु । यसको जवाफमा उनले राप्रपा नै भन्छिन् ।
राप्रपाको उद्देश्य बारे सोध्दा अभिनेत्री थापाले भनिन् – ‘थाहा छ ! मैले आम जनताको भाषा बोलिरहेको छु । पार्टीको सिद्धान्त र विचार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । पार्टीकै सिद्धान्तमा कतिपय मानिसहरुमा त्यो चिज चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । त्यो पछि ब्याख्या गरौँला’
यस्तो बोल्दा पार्टीले काशाही गर्दैन भन्दा रेखाले आफु कुनै पार्टीको नेतृको रुपमा कार्यक्रममा नआएको र एक अभिनेत्रीको रुपमा मात्र आएको बताउछिन् । उनले आफु कलाकार भएको हिसावले र सामान्य नागरिक भएको हिसावले गणतन्त्र रोजेको बताउछिन् ।
राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी हो । तर रेखाले गणतन्त्र रोजेपनि कमल थापाले हाँसोको रुपमा लिएका छन् । थापाले भिडियो शेयर गर्दै लेखेका छन् – ‘हाहाहा ! नो कमेन्ट’
प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७८ शुक्रबार १२ : ५८ बजे